नेपाली श्रमिकको लागि खुशीको खबर ! इजरायलले नेपालवाट माग्यो १ हजार केयरगिभर Nepalpatra नेपाली श्रमिकको लागि खुशीको खबर ! इजरायलले नेपालवाट माग्यो १ हजार केयरगिभर
नेपाली श्रमिकको लागि खुशीको खबर ! इजरायलले नेपालवाट माग्यो १ हजार केयरगिभर
काठमाडौं । इजरायल सरकारले नेपालबाट १ हजार जना कामदार माग गरेको छ । नेपाल र इजरायल सरकारबीच बीच २०७७ असोज १४ गते नेपाली श्रमिक इजरायल पठाउने विषयमा श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको थियो ।
इजरायलले नेपालवाट सुसुरे ‘केयरगिभर’को माग गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको हो । इजरायलले मागेको श्रमिकका लागि एक डेढ हप्ताभित्र विज्ञापन खुलाउने तयारी विभागको तयारी छ ।
इजरायलमा केयरगिभरका लागि जाने कामदारका लागि २१ दिनको म्याद राखेर आवेदन खुलाउने तयारी गरेको छ । इजरायलमा केयरगिभरमा जानका लागि उमेर २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
यो समझौता अनुसार इजरायलमा ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुष केयर गिभर इजरायल जानेछन् । यसरी जाने केयर गिभरले त्यहाँका स्याहार केन्द्रहरुमा काम गर्नेछन् । न्युनतम तलब १५ सय डलरमध्ये ३१० डलर खाना र आवास सुविधा बापत रोजगारदाताले कटौती गर्नेछ ।
सरकारले यसअघि सन् २०१५ मा इजरायलसँग गरेको केयर गिभर पठाउने श्रम समझदारीबाट पर्याप्त श्रमिकले लाभ उठाउन पाएका थिएनन् । थोरै मागमा धेरै आवेदन परेपछि छनोटमा चिठ्ठा प्रणाली लागू गरिएको थियो । जसले गर्दा भाषा सिकेर पनि धेरैले काम गर्न जान पाएनन् ।
म्यानपावर कम्पनीहरुले नै इजरायलमा केयर गिभर पठाउने गरेका थिए । इजरायल र नेपालबीच भएको सम्झौतामा पहिलो चरणमा ५ सय जना मात्रै कामदार लाने उल्लेख भएकोले दुईपटक विज्ञापन गर्ने विभागको तयारी छ ।